Awood u siinta JPMorgan iibinta buundada Osmangazi iyo Gebze İzmir RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliAwood u siinta JPMorgan ee Cusbada Cusmaaniga iyo Gebze İzmir Iibka Xawaaraha Gawaarida
16 / 02 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
maamulka jpmorgana ee buundada osmangazi iyo gebze izmir wadada weyn iibka
Otoyol Yatırım AŞ, oo bilaabay hawlgalkii jidka weyn ee Gebze-İzmir, kaas oo si weyn looga wada hadlay qiimaha safarka ee u dhexeeya Istanbul iyo Izmir ee baabuurta wakhtiga furitaankiisa, ayaa loo oggolaaday inuu la-taliye u noqdo baanka maalgashiga caalamiga ah ee JPMorgan.
Macluumaadka ku saabsan oggolaanshaha waxaa laga soo helay afar ilo ku dhow maaddada.
Turkey, mid ka mid ah mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu weyn oo ay ku jiraan buundooyinka Osmangazi Gebze-Izmir jid curdan Nurol In April 2009, Özaltın, Makyol, Astaldi oo ku guuleystay dallad Gocay shirkadaha.
Isugeynta qiimaha maalgashiga oo dhan 7.3 bilyan doolar, mashruucan waxaa lagu maalgeliyey 4.96 bilyan oo doolar oo amaah ah, 1.5 bilyan doolar oo caddaalad ah iyo 800 milyan oo doollar dakhli shaqo oo saafi ah.
Ilo xog ogaal toos ah ka leh mowduuca ayaa sheegaya in kadib markii la ogolaaday JPMorgan, in wax iibsadayaasha la qiimeyn doono, "Inta saamiyada la iibin doono waxay kuxirantahay iibsadayaasha, qiimaha iyo dulsaarka."
JPMorgan kama uusan hadlin mawduuca, halka Otoyol AŞ uusan helin jawaab markii uu qorayay warka.
Talyaani Astaldi, oo qayb ka ah wax ka yar 19 boqolkiiba mashruucan, ayaa lagu dhawaaqay isku-tag ka dib markii uu si xoogan u saameeyay hoos udhaca wershadaha dhismaha talyaaniga. Macnaha halkan, joogitaanka Turkiga ee sannadka Astaldi ugu danbeysay ee Istanbul dhamaadka buundada saddexaad ayaa isku raacay in la iibiyay 33 boqolkiiba saamiga ee rafiiqa Turkish.
Halka Otoyol Yatırım A.Ş. uu lahaa 26.98 boqolkiiba Nurol İnşaat iyo Özaltın, Astaldi wuxuu lahaa boqolkiiba 18.86 halka Göçay uu lahaa 0.2 boqolkiiba.
Bilowgii sanadkii hore, waxaa la shaaciyey in dadaallo loogu gogol xaarayo qiimaha waddada weyn ee Gebze-İzmir iyo xulista lataliyayaasha go'aaminta iibsadeyaasha mustaqbalka.
YAVUZ SULTAN SELİM BRIDGE SUDUXDA
Sanduuqa oo ay dhiseen lix shirkadood oo Shiinees ah bishii Diseembar, waxaa lagu muujiyey saxaafadda, halkaas oo ay ku iibsan doonto 51% Buundada Saddexaad ee Bosphorus iyo Wadada Waqooyiga Marmara. Shirkadaha wax laga weydiinayo ayaa kala ah: China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway iyo Anhui Expressway.
688.5 SIYAASADDA MILLION
Xubnaha guddiga ayaa ku kharash garayn doona $ 688.5 milyan oo shuraako ah. Wehelka ugu weyn ee mashruucu wuxuu noqon doonaa China Merchants Expressway oo leh boqolkiiba 31 saamiyada. CMU oo leh boqolkiiba 20%, Zhejiang iyo Jiangsu Expressway oo leh 17.5%, Sichuan Expressway oo leh 7% iyo Anhui Expressway oo leh 7%.
3 DIYAAR DILE
Baaxadda buundada Yavuz Sultan Selim, oo dhererkeedu dhan yahay 322 mitir, waa 59 mitir. Buundada waxay leedahay dhererkeedu yahay 1.408 mitir dhererkiisuna waa 2 kun iyo 164 mitir. Qiimaha maalgashiga ayaa ah 3 bilyan oo doollar. Buundada Yavuz Sultan Selim waxay leedahay 135 kun oo gaadiid maalin kasta. (Reuters)
'Setup' Diyaarinta buundada Osmangazi
Altepe waxa uu doonayay in awoodda lagu furo dunida
Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ee loogu tala galay dhismaha wadada wadista fiilooyinka ee Siteler-Sıhhiye…
Turkey General Railway Line Studies Management Waayo, helitaanka curdan tahay mashruuca ...
Antalya 3. Lagu oggolaaday Nidaamka Isgoyska marxaladda
Cadeynta Maamulka Awoodda Mar labaad YTSO